Thatha ithuba i-Android ngezi ndlela zophuhliso | I-Androidsis
Izinketho zophuhliso lokufumana okuninzi kwifowuni yakho ye-Android
Okunokwenzeka Wakhe weva malunga neenketho zophuhliso lwefowuni yakho ye-Android?. Enkosi kubo, sinako ukufikelela kuthotho lwemisebenzi eyongezelelweyo, kwaye zininzi ezikhoyo. Ke ngoko, ngezantsi siza kukubonisa uthotho lwezi ndlela, ukuze ufumane okuninzi kwifowuni yethu.
Into yokuqala esikubonisa yona yile indlela esinokuthi senze ngayo olu khetho lophuhliso kwi-Android. Kwaye emva koko sikushiya nezinye ezikhoyo, kwaye oko kunokuba nomdla kuwe, kuba bayasivumela ukuba siyisebenzise kakuhle ifowuni yethu kwiimeko ezininzi.
1 Sebenzisa iinketho zophuhliso
2 Iscreen esisebenzayo ngelixa ubiza
3 Guqula umxholo wescreen
4 Ithoni yokukhala eneseti yentloko yeBluetooth
Sebenzisa iinketho zophuhliso
Indlela yokwenza iinketho zophuhliso kwi-Android ihlala ifana kwiifowuni ezininzi, nangona indawo inokwahluka ngokuxhomekeke kulwakhiwo okanye imodeli. Enye into ekufuneka uyigcinile kukuba kuxhomekeke kwifowuni yakho awunakho konke okanye ukhetho olufanayo olufumanekayo.
Xa sele sithethile, ukuze sisebenze, singena kuseto lwe-Android kwaye siye kwicandelo lolwazi kwifowuni okanye malunga nefowuni. Apho sijonga icandelo leenombolo zokudibanisa kwaye ucofe kulo ngokuphindaphindiweyo. Kuxhomekeka kwibhrendi eya kwahluka, kwezinye ngamaxesha ama-7 kwaye kwezinye kali-10.
Isaziso siya kuthi emva koko sivele kwiscreen ukuba sele sizisebenzisile ezi ndlela, okanye iya kusicela ukuba samkele ukuba siyabasebenza, kwimeko apho siyinika ukuba yamkele. Ngale ndlela, sinokuqala.
Iscreen esisebenzayo ngelixa ubiza
Ungayidinga ifowuni ukuba ingalali ngelixa utshaja, kuba wenza into. Kule meko, sinayo ngaphakathi kukhetho lophuhliso icandelo elibizwa ngokuba siscreen esisebenzayo. Ecaleni kwaso sifumana iswitshi, ke ukuba sifuna ukuba nescreen sisebenze, kufuneka sisebenzise utshintsho olwenziweyo. Indlela esivumela ukuba sisebenzise isikrini xa silayisha, nangona ayisiyonto ilungileyo ukuba sifuna ukutshajisa ifowuni ngokukhawuleza.
Guqula umxholo wescreen
Lo ngumsebenzi onokuba luncedo kwabo basebenzisi kwifowuni ye-Android enezikrini ezinkulu okanye isiphelo esichaseneyo, kunye nezikrini ezincinci. Kuba olu khetho luya kusinika ithuba loku beka ububanzi kumxholo oboniswe kuwo. Ngale ndlela, sinokuyihlengahlengisa ngokobungakanani besikrini, ukufumana okungakumbi kuyo. Ukuphakama kwenani, zincinci iinxalenye.
Olu khetho ihlala iboniswa ngegama Ububanzi okanye Ububanzi obuncinci, kwaye ikwicandelo elinokhetho olunokukhetha kwiscreen. Olukhetho ekungekho kubo bonke abasebenzisi abanalo, kuba umzekelo, andinalo kwifowuni yam. Nangona kwezinye iimodeli kunokwenzeka ukuba uyisebenzise.
Ukuba ufuna ukwenza utshintsho olungaphezulu kwiscreen, Ungayifaka kwakhona kumnyama nomhlophe.
Ithoni yokukhala eneseti yentloko yeBluetooth
Kusenokwenzeka ukuba usebenzisa iseti yentloko yeBluetooth nefowuni yakho ye-Android. Xa bekufowunela ngelixa besebenzisa ezi ntloko, ngekhe uve ithoni yokukhala, ke kuya kufuneka uyibone kwisixhobo, okanye isandi sayo sahlukile kwiimeko. Kodwa, kolu khetho lonjiniyela kukho isisombululo kule ngxaki.
Kuba kukho inketho yokuba ibizwa ngokuba "Yenza iFowuni yeBluetooth". Enkosi ngayo, xa besitsalela umnxeba kwaye sisebenzisa ezi ntloko, siya kubamamela, kwithoni yokukhala efanayo. Ngale ndlela, asizukukwazi ukwenza nayiphi na iminxeba ngelixa sisebenzisa ezi ntloko kunye nefowuni ye-Android. Ke ngoko, konke ekufuneka sikwenzile kukwenza lo msebenzi usebenze, onotshintshi ecaleni kwawo, ongasebenzi ngokungagqibekanga.
Ukongeza, kwiBluetooth yefowuni yethu sinokufumana okuninzi kuyo kuzo zonke iintlobo zeemeko ezahlukeneyo, njengoko besesitshilo kuboniswe ngasentla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Izinketho zophuhliso lokufumana okuninzi kwifowuni yakho ye-Android
Ungayifumana njani inqaku lokumamela kuWhatsApp
Isamsung iya kubheja kwisenzisi seminwe eskrinini